Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 18)
Apple vs Samsung: caruurtu wey doortaan waana tan natiijada….
Dagaalkii Apple iyo Samsung wuxuu ku socdaa macno aad u macaan muuqaalkii ugu dambeeyay ee lagu daabacay BusinessInsider oo ay caruurtu ku doortaan.
Sida loo qariyo barnaamijyada la iibsaday ee ku jira macruufka 8
Sidan ayaan ku qarin karnaa codsiyada horay looga soo iibsaday App Store oo sababo jira awgood aanan dooneynin inaan ku muujino qeybta wax iibsiga.
Dhaqaajiso barnaamijyada helitaanka iyadoon lahayn astaanta ereyga ee macruufka 8.3
Firfircoonida hawsha ah inaadan weydiisan furaha sirta ah markaad ka hesho barnaamijyada bilaashka ah Dukaanka App si aad uguhesho sahlanaan iyo xawaare.
Sida loo sameeyo gurmad iPhone ah
Casharkaan waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo keydkaaga iPhone-ka oo wata iTunes iyo iCloud labadaba si aadan waxba u lumin.
IOS 8.3 waxay xadideysaa helitaanka xusuusta iPhone
IOS 8.3 waxay xaddideysaa marin u helka xusuusta iPhone-ka, iyadoo aan noo oggolaaneynin inaan galno feylasha xusuusta flash-ka iyo xaddidaadda gelitaanka
Sida loo demiyo log log on iPhone
Baro sida loo kiciyo barta waxqabadka ee iPhone-ka isla markaana u joojiso mobilada Apple inay cabbiraan tallaabooyinkeenna si loo badbaadiyo batteriga.
Couria ee macruufka 8 ayaa hadda laga heli karaa Cydia
Nooca xasiloon ee ugu dambeeya ee Couria ee iOS 8 ayaa hadda laga heli karaa Cydia si bilaash ah wuxuuna keenaa astaamo cusub.
Hubiyay, macruufka 8.3 wuxuu hagaajiyaa batteriga iPhone
Maqaalkan waxaan kuugu sheegayaa waxyaabaha ku saabsan tusaalooyinka sida iOS 8.3 wuxuu ku hagaajiyaa batteriga tirakoobka ujeeddada.
Android Wear Utility tweak wuxuu ka dhigayaa Android Wear inuu ku habboon yahay iPhone
Waxaan ahayn dhowr toddobaad oo dhowr horumariyayaal ay muujinayaan horumarka ay gaarayaan si ay u awoodaan inay adeegsadaan ...
Waxaan kuu soo qaadaneynaa hage dhameystiran oo ku saabsan waxa ay tahay inaan sameyno haddii ay dhacdo in dhibaato naga soo gaartay luminta ama xatooyada iPhone-keena.
Sida loo rakibo Windows-ka 95/98 iPad-ka
Thanks to Jailbreak waxaan sameyn karnaa waxyaabo haddii kale aan macquul aheyn. Maanta waxaan ku tusineynaa cashar lagu rakibo Windows 95/98 iPad-kayga
Sida loo sameeyo dariiqa bogga oo ku yaal iPhone
Tilmaame si aad u sameysid astaan ​​astaan ​​bog deg deg ah shaashadda guriga ama xarunta ogeysiinta ee iPhone ama iPad oo leh iOS.
Sida loo rakibo Waqtiga daan-doogga oo aan lahayn Jailbreak
Waxaan hadda rakibi karnaa Waqtiga loo yaqaan 'Popcorn Time', 'burcad badeedda' Netflix ee qalabka iOS-ka iyada oo aan loo baahnayn Jailbreak. Waxaan ku tusaynaa sida.
Sida loo tirtiro loona soo cesho Sawirrada iyo Fiidiyowyada laga helo iCloud.com
Haddii, sabab kasta ha noqotee, aan dooneyno inaan tirtirno ama aan ka soo kabanno sawirrada iyo fiidiyowyada, waxaan ku sameyn karnaa baare ka socda iCloud.com oo leh buuggan fudud.
Sida loo tirtiro kaararka deynta ee ku kaydsan Apple Pay
Tallaabooyinka looga saarayo kaarka deynta ee la xiriira Apple Pay
Sida loogu xiro iPhone-gaaga hal codsi oo keliya adoo adeegsanaya Isticmaal Hagahan
Maanta waxaan ku tusineynaa casharro aad ku baran karto sida loogu xiro iPhone-gaaga hal codsi oo keliya adoo adeegsanaya Liiska Hagaha La Hagayo.
Sida loo hagaajiyo shabakadaada WiFi ee guriga
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo hagaajiyo isku xirka Wi-Fi ee aaladahayaga anagoo ku sameynay wax ka badal yar router-keena
Waa inaan ka faa'iideysanaa inta ugu badan iCloud iyo tallaabooyinkan fudud waxaad ku ogaan doontaa sida loo furo booska iCloud.
Kudar oo u fiirso heesaha heesaha Lugood
Ku dar heesaha heesaha ee iTunes oo si dhakhso leh u arag iyaga oo isticmaalaya labadan barnaamij ee si fudud loo isticmaali karo.
Sida loo isticmaalo kamaradda iPad-ka
Kaamirada iPad-ka, sida codsiyada badankood, aad ayey u fududahay in la isticmaalo.
Sirta kamaradda iPhone-ka ayaa shaaca ka qaaday patent
In Apple uusan kordhin mudanaha micnaheedu maahan inuusan ka walwalin tayada sawirada. Waxaan kuu sheegeynaa sirta ugu fiican ee lagu hayo kamaradda iPhone-ka.
Nutshell wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameyso fiidiyowyo gaagaaban oo asal ah
Nutshell waxaad ku abuuri kartaa fiidiyowyo cajaa'ib leh si aad ugula wadaagto shabakadaha bulshada
Sida loogu xiro iPad-ka TV-ga
Waxaan haynaa dhowr ikhtiyaar oo aan ku xidhi karno iPad-ka telefishankayaga: laga bilaabo codsiyada bilaashka ah illaa qalabka
Xiaomi waxay soo bandhigtay Mi Smart Scale, oo ah miisaan caqli badan
Xiaomi waxay ku dhawaaqday Mi Miisaanka cusub ee Miisaanka, oo ah miisaan caqli badan oo leh qiime aan caadi aheyn oo ah $ 15
IPhone 6 waxay muujineysaa waxqabadka garaafka ee kafiican Galaxy S6
Falanqaynta ka dib, iPhone 6 wuxuu muujinayaa waxqabad muuqaal ah oo ka wanaagsan kan Samsung Galaxy S6, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan furayaasha iyo xogta.
Sida loo habeeyo asalka shaashadda iPad-ka
Beddelidda muuqaalka asalka ah ee ipadkeena waa nidaam aad u fudud. Waa tan sida degdegga ah ee loo sameeyo.
Carrefour waxay dib u cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda My Carrefour guul weyn
Carrefour waxay cusbooneysiineysaa barnaamijkeeda My Carrefour waxayna kadhigeysaa wax cajiib ah dhamaan dadka booqda supermarket-kan
Sida loo joojiyo hagaajinta iPad-ka
Joojinta qoraalka tooska ah ee farriinta tooska ah ee iPad-keena leh iOS 8 waa mid aad u fudud. Halkan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Todoist, oo runtii ah maareeyaha hawsha xiisaha badan
Todoist-ka waxaad gacanta ku haysaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku maamusho maalintaada si maalin leh si wax ku ool ah
Sida loo dhigo lambarka sirta ah ee loo yaqaan 'alphanumeric password'-ka Ipad-ka
Waxaan ku baraynaa sida loo qaabeeyo lambarka sirta ah ee loo yaqaan 'alphanumeric password' si loo furo iPad-kaaga iyada oo mid ka mid ah macruufka hadda la heli karo
Waxay maareeyaan inay ku shaqeeyaan Super Mario 64 on iOS
Horumariyaha Roystan Ross ee boggiisa ayaa dhawaan muujiyay sida loo ordo Super Mario 64 ee iOS-ka iyada oo loo marayo biraawsarka iyo Web Unity Player.
Intee in le'eg oo dammaanad ah ayuu iPhone leeyahay
Intee in le'eg oo damaanad ah ayuu haystaa iPhone Waxaan si faahfaahsan ugu sharraxnaa arrinta ku saabsan xaddidaadda Apple iyo Sharciga Macaamiisha ee Spain iyo dalal kale.
IOS 8, lix bilood kadib kuwani waa gabagabadayada
In ka badan lix bilood ayaa laga joogaa markii Apple ay si ballaaran u sii deysay iOS 8 waana kuwan gabagabadii.
Sida loo Video iPhone Screen la OS X Yosemite
Thanks to macruufka 8 iyo Yosemite waxaan duubi karnaa shaashadda iPhone ama iPad adigoon adeegsan codsiyada dhinac saddexaad.
Tabaha loogu talagalay macruufka 8 (IV): duub shaashadda iPhone iyo iPad
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo duubo shaashadda iPhone-gaaga ama iPad-kaaga Mac iyadoo aan loo baahnayn codsiyo dhinac saddexaad ah.
IOS 8.3 waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo waxyaabaha bilaashka ah App Store adigoon erey sir ah haysan
IOS 8.3 waxay keeneysaa wararka qaar, iyaga ka mid ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo waxyaabaha bilaashka ah ee App Store adigoon erey sir ah haysan
Ku rakib macruufka 8.3 qalabkaaga meel ka baxsan Mareykanka
Maanta Actualidad iPhone waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo beta-ka dadweynaha ee macruufka 8.3 ee iPhone-kaaga adigoon ka imaan Mareykanka
Furo barnaamijka waxqabadka Apple Watch ee ku jira iPhone-kaaga adigoon lahayn Jailbreak
Waxaan ku tusineynaa sida loo furo barnaamijka Waxqabadka ee Apple Watch ee ku saabsan iPhone-kaaga oo wata iOS 8.2.
Waxay maareeyaan inay dhaafaan lambarka qufulka ee iPhone
Kuwani waxay maareeyaan inay ka gudbaan lambarka qufulka iPhone iyada oo loo marayo habka xoogga caayaan.
9 beddelka WhatsApp codka ayaa ku baaqaya iPhone
9 beddel si aad awood ugu yeelatid inaad wicitaan ka samaysatid moobilkaaga illaa WhatsApp dhibayso si aad awood ugu yeelatid wicitaanada iPhone-ka
Iftiimi, barnaamijka tixraaca cusub ee loogu talagalay tafatirka sawirrada iPhone-ka
Iftiimintu waxay la timaaddaa xoog si ay ula wareegto carshiga suuqa adag ee lagu dagaallamo barnaamijyada tafatirka sawirrada
15 xakameyn si aad uga faa'iideysato Apple TV-gaaga
Waxaan kuu soo bandhigeynaa shan iyo toban isku dhafan oo furayaal ah ama kontaroolo si aad wax badan uga hesho Apple TV-gaaga
Milkiilaha iyo sayidka shabakadaha bulshada
Isku-duwidda tweaks si loo badbaadiyo sawirrada Snapchat, Instagram, fiidiyowyada Facebook, iyo kuwa kale si loo joojiyo jeegga buluugga ah ee WhatsApp iyo in ka badan.
Dib-u-awood 2G ee iOS 8.1
Casharradan waxaan awoodi doonnaa inaan dib-u-awood u siino ikhtiyaarka 2G ee Movistar, Yoigo, Orange iyo Vodafone.
Khiyaamada macruufka 8 (II): Ha dhibin
Waxaan ku tusineynaa sida loo qaabeeyo macruufka ha u carqaladeynin ikhtiyaarka si looga fogaado ogeysiisyada dhibta badan inta lagu jiro habeenkii
Raac Formula 1 ka iPhone iyo iPad
Waxaan ku tusineynaa codsiyada ugu fiican ee la raaco oo aan ku aragno qaaciddada 1 ee iPhone iyo iPad
11 waxyaalood oo ay sameeyaan Apple Watch iyo Android Wear ma sameeyo
Maanta Actualidad iPhone waxaan ku iftiimineynaa kow iyo toban waxyaalood oo Apple Watch sameeyo iyo Android Wear aysan qaban.
Ra'yi uruurinta Todobaadka: Goobaha Cirka, Dahabka ama Lacagta MacBookga?
Muxuu yahay midabka aad ugu jeceshahay MacBook-ga?
Sida hoos loogu dhigo macruufka 8.2 ilaa iOS 8.1.3
In Actualidad iPhone waxaan kaa caawinaynaa inaad hoos u dhigto macruufka 8.2 ilaa iOS 8.1.3.
Xarkaha birta iyo maqaarka ee loogu talagalay Apple Watch oo ka hooseeya $ 100
Haddii aad raadineyso waxyaabo kale oo ka duwan xargaha rasmiga ah ee Apple Watch, Kickstarter waxaad ka heli kartaa olole iyaga ku iibinaya wax ka yar $ 100
Hab cusub oo loo abuuro fayl nugul iOS 8
Qaab cusub oo lagu abuuro fayllo buul ah oo ku jira macruufka oo adeegsadayaasha qaarkood laga yaabo inay ka sahlan yihiin kii hore.
WhatsApp wuxuu mamnuucayaa macaamiisha saddexaad ee macaamiisha nolosha
WhatsApp ayaa ka mamnuucday dadka isticmaala macaamiisha dhinac saddexaad nolosha, qiyaas xoogaa adag.
Isbarbardhig: Samsung Galaxy S6 vs iPhone 6 Plus
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhiga ugu adag ee u dhexeeya Samsung Galaxy S6 iyo iPhone 6 Plus
Sida loogu beddelo tags Shazam liiska Spotify ama Rdio
Samee heesaha aad raadineyso Shazam isla markaaba laga helo Spotify ama Rdio iyada oo loo marayo liis-ka-ciyaar.
Maamulaha Dahabka ah, ciyaar xiisa badan oo waxyaabo badan lagu horumariyo
Maamulaha Dahabka ah ayaa kuu oggolaanaya inaad isku dhejiso kabaha madaxa isboortiga koox kubbadda cagta ah
Hagaaji "Ma heli karo darawalka Apple" ee TaiG ee Windows-ka
Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa la kulmay fariinta farxadda leh "Ma heli karo darawal Apple ah, fadlan soo dejiso oo rakib iTunes" casharkaan aan ku xallinayno.
Cusbooneysiinta cusub ee Telegram waxay ku ilaalineysaa barnaamijka Touch ID
Cusbooneysiinta cusub ee Telegram waxay noo ogolaaneysaa inaan ku xakameyno arjiga iyada oo loo marayo Touch ID marka lagu daro tafatirka sawiradeena ka hor inta aan lala wadaagin.
F.lux, xalka hurdo la’aanta uu keeno iphone
Taleefankayaga iPhone-ka ma noqon karo saaxiibkeen ugu fiican marka saacadaha nasashada ay galaan, si looga fogaado hurdo la’aan teknoolojiyadeed waxaan soo jeedineynaa adeegsiga f.lux.
12 qarsoodi ah oo ku qarsoon EarPods iyo wixii kale ee ku habboon ee sameecadda iPhone-ka ah
Soo ogow 12 astaamood oo qarsoon oo ka mid ah iPhone iyo iPad EarPods la jaan qaada iyo sameecadaha dhagta kuu oggolaan kara inaad isticmaasho kamaradda, u yeer Siri iyo wax ka badan.
Dagaalka casriga 5: sawirada daabacan wax ka yar Euro
Hada waxaad kuheli kartaa 5-ta casriga casriga ah wax kayar yuro, waa dalab aan laqiyaasi karin oo loogu talagalay toogashada epic
Talo: inaad ku ciyaarto muusig ama fiidiyow waqti cayiman ka dib
Tilmaame si aad u joojiso ku ciyaarida muusikada ama fiidiyowga tooska ah iPhone-kaaga ama iPad-kaaga oo leh saacad la garan karo oo leh wakhtiga aad rabto.
Sida loo joojiyo muusikada ku jirta iPad-kaaga barnaamijka Clock
Adiga oo adeegsanaaya saacada laga heli karo arjiga macruufka saacada waxaan iskula jaan qaadi karnaa in muusigga ciyaarayaa istaago waqti cayiman
Nabadgelyada isku xira hillaaca ayaa jabisay, waa war wanaagsan oo loogu talagalay JAILBREAK
Waxay ku xad gudbaan amniga isku xidhka hillaaca ee iPhone-ka iyo iPad-ka, waana wax fududayn doona raadinta ka faa'iideysiga si loo xiro iOS 8 iyo iOS 9.
Hubi amniga koontadaada Google oo ka hel 2GB keyd dheeraad ah Drive
Hubi amniga koontadaada Google ama Gmail oo waxaa lagugu abaalmarin doonaa 2 GB oo keyd dheeraad ah oo ku jira Google Drive.
Waxay ka qaadaan iphone 6 Plus microwave-ka
Waxaan hubineynaa waxa dhacaya haddii aan dhageysano iWave oo aan iPhone-ga ku dhigno microwave-ka oo sugeyno inuu batteriga ka kaco.
Milicsiga: Dhammaan fiidiyowga iyo codka laga helo iPad-kaaga kombiyuutarkaaga (PC iyo Mac)
Barnaamijkan cajiibka ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka turjumno dhamaan fiidiyaha iyo codka laga helo iPad-kaaga kombiyuutarka, waqtiga dhabta ah.
Laba siyaabood oo loogu keydiyo sawirrada Instagram-ka dusha
Iyadoo loo marayo labadan qaab waxaan ku badbaadin karnaa sawirrada Instagram-ka sawir-gacmeedka iPhone tooska ah.
XAgent, oo ah basaas iPhone ah oo xadaya sawiradaada iyo xogtaada kale
XAgent ayaa la helay, basaas u ah iPhone iyo iPad oo xada sawirada, xogta isla markaana awood u leh inuu wax ka duubo makarafoonka aaladaha ay ku rakiban yihiin iOS 7 ama iOS 8.
PhoneExpander, oo ah codsi lagu fasaxayo booska taleefankaaga iPhone (OS X)
Xusuusin bilaash ah iPhoone-kaaga oo leh 'PhoneExpander', oo ah codsi kuu oggolaanaya inaad nadiifiso kaydadka, codsiyada, sawirrada, fiidiyowyada, iyo muusikada.
PhoneExpander wuxuu kaa caawinayaa inaad lacag la'aan ka dhigto iPad ama iPhone
PhoneExpander wuxuu kaa caawinayaa inaad bilaash ku siiso iPad-kaaga ama iPhone adoo tirtiraya faylasha qashinka ah.
Codsiyada lagu maareeyo emaylka ku saabsan iPhone-ka (I)
Dukaanka App waxaa ku yaal codsiyo badan oo lagu maareeyo emaylkeena. Laga soo bilaabo Actualidad iPhone waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo uruurinno kuwa ugu fiican dhowr qoraal
Sida hoos loogu dhigo macruufka 8.1.2 si aad u awood ugu yeelatid Jailbreak
Weli waa loo yareyn karaa macruufka 8.1.2 haddii aad u cusbooneysiiso macruufka 8.1.3. Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida loo sameeyo
Sida loo yareeyo iOS 8.1.3 ilaa 8.1.2
Iyadoo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macruufka ah, Apple wuxuu albaabada u laabayaa JAILBILYS, casharkaan waxaan ku baranaynaa inaad hoos ugu dhigto macruufka 8.1.2.
Nabadgelyo JAILBREAK macruufka 8.1.3
Iyadoo cusbooneysiintii cusbooneysiinta ee iOS (8.1.3) waxaan ku sagootineynaa JAILBB JAILBY iyo xoogaa faa iidooyin kale ah oo suurtagaliyay.
Habka ugu fiican ee loo dejiyo Gmail-ka loogu talagalay IOS
Waxaan kuu soo qaadaneynaa casharro kaa caawinaya inaad sameysato koontadaada Gmail-ka ah ee barnaamijka iOS Mail si hufan.
Hadda waad ka xiri kartaa macruufka 8.1.2 Mac-gaaga, waxaan kuu sharraxeynaa sida
Tilmaamaha ku saabsan sidii loo sii deyn lahaa nooc kasta oo ka mid ah macruufka 8 ee iPhone iyo iPad oo laga helo Mac iyadoo la adeegsanayo PP Jailbreak oo lala macaamilayo TaiG.
Sida loo xakameeyo kombuyuutarkaaga ama Mac-gaaga macruufka adoo adeegsanaya Google Remote Desktop
IPad news waxay kuu keeneysaa casharro aad kumbuyuutarkaaga kaga xakameyso macruufka Chrome Remote Desktop.
Ku samee cod-garaacayaashaada iyo ogeysiisyada Garageband
Codsiga abuurka muusiga ee Apple "Garageband" wuxuu noo ogolaanayaa inaan sameysano codadkayaga caadada u ah.
Sida loo Soo Degsado iMazing Bilaash (Qiimaha joogtada ah $ 30)
Orod oo ka faaiidayso fursadan si aad u soo dejiso iMazing si bilaash ah, oo u keydso $ 29,99 ee ay ku kacayso.
Haddii aad haysato qalabkii hore ee Apple, waxaad kasban kartaa lacag badan
In kasta oo ay umuuqato in tikniyoolajiyaddu ay horay usocoto iyo in xulashooyinka qaar ay duugoobayaan, hadaad haysato aaladihii hore ee Apple, waxaad kasban kartaa lacag aad u badan.
8 sano ka hor maanta Apple ayaa soo saartay iPhone
maanta waxay ku beegan tahay sanad-guuradii 8-aad ee markii la soo saaray iphone-kii ugu horreeyay, taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee ay soo saarto shirkadda Apple. Waxaan ku tuseynaa bandhigiisa oo dhameystiran.
Sida loo raadiyo shuruudaha Safari bogga dhexdiisa
Safari waxay leedahay hawl yar oo qarsoon oo ku jirta macruufka 8: ka raadi ereyada gudaha bog adigoon ka tagin, dabcan
Samsung Galaxy S5 way ka fiican tahay iPhone 6 qanacsanaanta macaamiisha
Waxaa jira sahanno kahortagaya Terminaalka ugu dambeeya ee Apple iyo kuwa ay xafiiltamaan, sida uu sheegayo Samsung Galaxy S5-tii ugu dambeysay waxay ka fiicantahay iPhone 6 qancinta macaamiisha.
Xaddidaadda codsiga hooyo 'Videos' ee macruufka
Codsiga asalka ah ee macruufka ah ee noo ogolaanaya inaan daawado fiidiyowyada ayaa si weyn u xaddidaya waayo-aragnimada isticmaalaha waana taas sababta aan ugu khasbanaaneyno inaan raadino waxyaabo kale
Amniga faraha faraha ayaa wax yeeleynaya shir hacker
Waxay maareeyaan inay soo saaraan faro laga qaado sawirada qofka oo ay dhinac maraan qufulka Aqoonsiga Taabashada
Sida loo isticmaalo muuqaalka Handoff ee Macs-kii hore iyada oo aan lahayn Bluetooth 4.0
Waxaan ku tusineynaa sida loo xalliyo dhibaatooyinka Handoff ee ku shaqeynaya kombiyuutarradii hore ee Mac-da ee loo yaqaan 'Bluetooth'
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka Wifi ee iOS 8- iOS 8.1.2
Liiska xalka suurtagalka ah ee dhibaatooyinka Wifi ee iOS 8
Duufaan, barnaamij weyn oo lagu dhajiyo tweets fara badan oo isku xigxiga
Stormy waxaad ku daabici kartaa tweets badan si fudud oo aan dhib lahayn
Apple waa inuu hagaajiyaa habka looga saaro kaararka ku jira Passbook
Tilmaame si looga saaro kaararka, tigidhada ama tikidhada ku yaal Passbook-ka iOS 8 sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah
Sida loo xakameeyo iPad-ka Veency (Cydia)
Tilmaamaha 'Veency tweak' ayaa noo oggolaanaya inaan ka xakameyn karno iPad-keena Mac-da, Windows PC ama Linux.
Waxaan uxiraynaa iPow 3200 batteriga dibedda ah ee iPhone-kaaga
Ku guuleysto bilaash bilaash ah iPow 3200 si aad uga dallacdo iPhone-kaaga ama iPad-kaaga meel kasta oo aad uga mahadceliso awoodda 3.200 Mah. Kaqeyb gal tartanka.
Natalie Portman kuma jiri doonto filimka Steve Jobs
Atariishada Natalie Portman ma jileyso doorka dumarka ee hogaaminta filimka bionic ee Steve Jobs. Universal ma soo saarin wax war ah oo ay ku sharaxayaan.
Safari gaabis ah? Khiyaanadan ayaa hagaajin doonta waxqabadkaaga
Ku hagaaji waxqabadka Safari ee iPhone ama iPad adoo adeegsanaya xeelad kor u qaadi doonta xawaaraha rarka ee bogagga shabakadda ee aad booqato inta badan.
Sida loo JAILBREAK TaiG ka Mac la Windows Virtual Machine
Sida loo JAILBREAK TaiG on Mac isticmaalaya a Windows Virtual Machine. Si fudud loogu sharaxay sawirada.
Maxay faylalka ugu badbaado qabaan ugana khaaska yihiin AirDrop?
Hawsha la wadaagayo feylasha kombiyuutarada iyo macruufka waxay siineysaa isticmaalaha heer nabadgelyo iyo asturnaan ay adag tahay in la hagaajiyo.
Si fudud ugu dar wabtiriye WiFi ah shabakadaada mahadsanidiin WPS
Ku darista daabacaad shabakadaada Madaarka mahadnaqa shaqada WPS waa mid aad u fudud waana kuu sharixi doonaa talaabo talaabo.
Sida loogu isticmaalo WhatsApp-ka Windows PC ama Mac
Tilmaame si aad uga maamusho WhatsApp kombiyuutarka Windows ama Mac, uga jawaab fariimaha WhatsApp ee ka yimaada PC ama Mac adoo adeegsanaya casharkaan
Kiisaska rasmiga ah ee Apple ee iphone-yada cusub oo leh qiimo dhimis 15% ah
Maanta waxaad ka iibsan kartaa kiisaska cusub ee Apple ee iphone 6 iyo 6 oo lagu daray qiimo dhimis 15% ah oo ah qiimahooda asalka ah.
U beddel sawir kasta vector adigoo isticmaalaya Adobe Shape
Adobe Shape waa barnaamij kuu ogolaanaya inaad kaamirada ka sameysato naqshado vector ah. Awood u lahaanshaha sameynta sawirada vector ee shayga la qabtay.
Tabaha lagu dallaco batteriga iPhone si dhakhso leh
Sida ugu dhakhsaha badan loogu soo dallaco iPhone-ka khiyaanooyinka qaarkood oo ka dhigi doona batterigaaga moobaylka lacag ka yar wakhtiga
Apple waxay sii wadaa inay saxiixdo macruufka 8.1, hoos u dhigis ayaa suurtagal ah
Sida loo yareeyo macruufka 8.1 ee iPhone ama iPad ka dib markii la cusbooneysiiyo macruufka 8.1.1 ama macruufka 8.2 beta oo markaa awood u leh in lagu xiro Pangu aan la xirin.
Maxay Tahay Aqoonsiga Taabashadu inuu joojiyo shaqada ka dib markii uu dib u bilaabo iPhone-ka?
Muxuu Taabashada Aqoonsi la'aanta u shaqeynayaa kadib markii dib loo bilaabo iPhone ama iPad waxayna na weydiineysaa inaan galno nambarka qufulka? Raadi sababta tan u dhacdo
Ku rakib macruufka 8.1 si aad uhesho intaad awooddo
Apple waxay soo saartay iOS 8.1.1 laakiin iOS 8.1 wali waa lagu rakibi karaa. Waxaan si faahfaahsan u sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Muxuu IPhone-ka leh 1GB RAM uu uga fiicnaadaa kuwa kale kuwa leh Android?
Farqiga u dhexeeya macruufka iyo nidaamyada hawlgalka Android. Dambe wuxuu sameeyaa cunno xad-dhaaf ah oo RAM ah, oo wiiqaysa waxqabadkeeda.
Cilad-bixinta AirDrop on macruufka 8 iyo Yosemite
AirDrop ma shaqeyneyso oo waa inay tahay sababta oo ah qalabkaagu waa la jaan qaadayaa? Xalkani wuu ku caawin karaa.
Ku rakib WhatsApp Beta si fudud adigoo u mahadcelinaya Jailbreak
Ku rakibidda WhatsApp Beta oo loo habeeyay iPhones cusub waa mid aad u fudud mahadsanid Jailbreak
Ku soo dejiso 141 walxaha Naqshadeynta Qalabka ee iPhone ama iPad
Ku soo dejiso 141 sawir-gacmeed loogu talagalay iPhone 6 iyo iPad oo ku saleysan Qalabka Naqshadeynta, is-dhexgalka cusub ee Android 5.0 Lollypop
Sida loo xakameeyo Spotify kombiyuutarkaaga iPhone
Tutorial si loo xakameeyo Spotify u Mac ama PC ka iPhone, iPad ama qalab Android, si aad u bedeli kartaa heesaha meel fog.
Eclipse 2 tweak's Dark mode wuxuu ku darayaa taageerada iOS 8 iyo iOS 8.1
In kasta oo Eclipse 2 uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan 'tweaks' ee aan ka faa'iideysan karno si aan u qaabeyno iPhone-ka, haddana ma aysan helin wax taageero ah oo ku saabsan IOS 8 iyo IOS 8.1
Sida looga hortago farriimahaaga maqalka iyo muuqaalka ah inay ku baaba'aan iMessage iOS 8
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee la yimid macruufka 8 wuxuu ahaa is-tirtirka fariimaha maqalka iyo muuqaalka ah ee lagu helo iMessage. Maanta waxaan ku tusaynaa sida loo beddelo.
U beddelo iPhone-kaaga kamarad fog
Barnaamijka Videography wuxuu u beddelaa iPhone-kaaga kamarad fog, oo aad ka xakamayn kartid biraawsar kasta oo Websaydh ah, adoo awood u leh inaad wax ka beddesho fogeynta, soo-gaadhista iwm
Cydia 1.1.16 hadda waa la heli karaa, markaa waad rakibi kartaa cusbooneysiintan
Cydia 1.1.16 ee loo yaqaan 'iOS 8 JAILBREAK' ayaa hadda la heli karaa si loo saxo khaladaadka marka laga soo celinayo kaydinta.
Si fudud wareejinta faylasha aad iPhone la iFile (Cydia)
iFile waa baare fayl awood badan oo noo ogolaanaya inaan u wareejino feylasha ama ka soo dirno iPhone-keena iyo iPad-ka iyadoon loo baahnayn fiilooyin.
iMazing: bedelka ugu fiican ee iTunes
iMazing, oo hore loo yiqiinay DiskAid, ayaa noo oggolaanaysa inaan u maamulno waxyaabaha ku jira aaladdayada qaab ka raaxo badan iTunes
Ku xir xisaabtaada Cydia qalabkaaga cusub
Ku xirnaanshaha koontadayada 'Cydia' qalabkeena cusub waxay noo oggolaaneysaa inaan ka soo kabanno dhammaan wixii aan soo iibsannay.
Sidee looga soo kabtaa iPhone qoyan
Waxay ka hadlaan sida looga soo ceshano iPhone-kiisa qoyan, ka dib markii ay qoyaan dareere. Hal xirmo oo gaar ah ayaa lagu sharaxay, laakiin kuwa kale ayaa laga wada hadlayaa.
Soosaarista wax soo saarka Apple ayaa lagu soo koobay boodhadh
Boodhadh weyn oo soo koobaya jadwalka sii deynta dhammaan alaabada Apple, oo ay ku jiraan iPhone 6, iPad Air 2, iMac Retina 5k iyo Watch.
Sida loo JAILBREAK qalabkaaga Pangu8
Pangu8 ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.1.0 waxayna noo ogolaaneysaa inaan si otomaatig ah ugu rakibno Cydia qalabkeena tan iyo intii aanan ku sameyn gacanta.
WhatsApp, waa sheeko isku mid ah dhammaan shirkadaha cusub ee Apple
WhatsApp ma joojiso niyadjabka marka loo eego la qabsashada uu u leeyahay wararka Apple walina ma taageerto iphone-kii ugu dambeeyay
Tallaabo-tallaabo ayaa looga hortagayaa iCloud inuu si otomaatig ah u kaydiyo sawirradaada
Tutorial si aad u ogaato sida xaqiiqda ah looga fogaado inaad sawirro ku yeelato iCloud. Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan hababka is waafajinta ee ay tahay in la joojiyo
Dhibaatooyinka ku haleeya 'Hotspot Instant' ee iOS 8 iyo OS X Yosemite
Hotspot Instant wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku isticmaasho isku xirka xogta iPhone ama iPad-ka Mac-gaaga.Waxaan kuu sharxeynaa sida loo helo.
Sida loogu wareejiyo macluumaadka ka yimid iPad-keena hore mid cusub
Haddii toddobaadyada soo socda aad ka mid tahay isticmaaleyaasha ka fikiray inay cusbooneysiiyaan iPad-koodii "hore" mid ka mid ah ...
Sida looga waco iPad
Iyada oo la adeegsanayo iOS 8 waxaan hadda ka wici karnaa telefoonkeena ipadka anaga oo aan taaban iPhone. Waxaan ku tusaynaa sida.
Jailbreak oo ku rakibo Cydia macruufka 8 talaabo talaabo ah
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo JAilbreak ula Pangu ka dibna gacanta ku rakibi Lydia
Sida loo dajiyo Handoff macruufka iyo Yosemite
Kuwani waa tallaabooyinka la raacayo si habboon loogu qaabeeyo muuqaalkan cusub ee Joogtada ah ee ku saabsan iPhone-kaaga, iPad-ka iyo Mac-ga.
Xalka dhibaatooyinka hawlgelinta SMS-ka ee Mac
Haddii lambarka firfircoonaanta SMS uusan ka muuqan Mac-gaaga, waxaan kuu sheegaynaa xalka
Sida loogu raaxeysto wicitaanada iPhone ee ku saabsan Mac-gaaga
Noocyada cusub ee macruufka iyo Mac OS X ayaa kuu oggolaanaya inaad ka jawaabto wicitaannada aad ku hayso iPhone-kaaga si toos ah kombiyuutarkaaga Apple. Maanta waxaan ku tusaynaa sida.
Sida looga dhaqaajinayo fariimaha qoraalka ah Mac-gaaga
Liistada talaabooyinka aad ku diri karto oo aad ku heli karto fariimaha qoraalka ah ee caadiga ah ee ka socda Mac
Sida loo isticmaalo saacadaha kaamerada ee iPad iyo iPhone
Hawsha saacadda cusub ee kamaraddu waxay noo oggolaaneysaa inaan dejino waqtiga aan u baahan nahay si aan uga soo muuqanno sawirka meesha aan dooneyno inaan ka soo muuqanno.
Ku keydi batteriga iPhone-ka adoo adeegsanaya miisaanka miisaanka ee iOS 8
In kasta oo qaabka grayscale aan loo soo saarin si loo badbaadiyo nolosha batteriga oo had iyo jeer dhibsado, haddana waa looga faa'iideysan karaa arrintan.
My NBA 2K15, barnaamijka saxda ah ee lagu kabayo ciyaartan weyn
My NBA 2K15 waxaad ku horumarin kartaa ciyaaryahankaaga, waxaad ku heli kartaa VCs maalin kasta ama waxaad ku maareyn kartaa MyTEAM iPhone-kaaga
Sida Looga Tirtiro Meel Furan Safar Tabs
Thanks to iswaafajinta iCloud waad xiri kartaa Safari tabs qalab kasta oo ka socda iPhone ama iPad
Sida looga helo iPad raadinta taariikhda raadinta iPad
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee IOS 8 waa suurtagalnimada inaan la qaadanno taariikhda iPhone iyo iPad, laakiin mid ka mid ah labada qalab ayaa yimid.
Sida loo dar, looga saaro oo loo beddelo amarka widget-ka macruufka 8
Cusboonaysiinta weyn ee macruufka 8 waxay ahayd imaatinka widgets. Xaaladdan oo kale, waxaan dooneynaa inaan ku tusno waxa ay tahay inaad sameyso inaad ku darto, ka saarto oo aad beddesho amarka kuwan
Life360 waa xarun ogeysiin qoyskaaga oo dhan
Sida looqariyo talo soo jeedinta erayga kumbuyuutarka iOS 8
In kasta oo adeegsadayaal badani u arkaan inay iyagu runtii waxtar leeyihiin, kuwa kalena waxay ka helaan inay dhibsadaan. Maanta waxaan ku baraynaa sida loo qariyo talooyinka erayga kumbuyuutarka iOS 8.
Sida filimada loogu sifeeyo bilaashka iPhone-ka oo wata MovieBox
PopCorn wuxuu si rasmi ah ugu shaqeeyey macruufka marka laga hadlayo aaladaha jailbroken, maantana waxaan kahadleynaa sida loo daawado aflaanta bilaashka ah iphone adiga oo aan fureyn MovieBox.
Goobaha asturnaanta lagu taliyay ee iOS 8
IPhone 6-ka waxaad ku xakameyn kartaa xulashooyinka kuu oggolaanaya adeegsi gaar ah oo aad u gaar ah qeybta, iyaga ayaga waxaan arki doonnaa shan goobood oo aasaasi ah.
Tani waa sida ogeysiisyada isdhexgalka ay ugu shaqeeyaan macruufka 8
IOS 8 waxay keeneysaa ogeysiisyo is-dhexgal cusub. Waxaan ku tusaynaa sida ay u shaqeyso
Aqoonsiga Taabashada Aqoonsiga Ugu Fiican
Isku soo duubida codsiyada horeyba uga faa'iideysanayay Touch ID, hubaal inay jiraan wax badan, laakiin kuwani waa kuwa aan ka helnay waxtar badan.
Mike Huang wuxuu maareeyaa inuu dekedda Android L ku wareejiyo iPhone 5s
Lahaanshaha iPhone-ka ku shaqeeya Android waa odyssey aan macquul ahayn, laakiin Mike Huang wuxuu maareeyaa inuu dekedda Android L ka saaro iPhone 5s oo uu ku muujiyo fiidiyoow.
Kudar dariiqyo xiriirrada WhatsApp
Waxaan ku tusineynaa sida loo abuuro tuuryo si deg deg ah loogu diro farriimaha WhatsApp xiriir
Sida loo abuuro astaan ​​cunug ee Wadaagista Qoyska
Halkan waxaan ku barinaa sida loo abuuro koonto ilmahaaga dhexdiisa Wadaagista Qoyska, ee iOS 8
IPhone 6 ma aha mid biyuhu diidan yihiin, laakiin wuu iska caabiyaa
Muuqaal fiidiyow ah ayaa tijaabinaya iska caabinta iPhones-ka cusub ee biyaha hoostooda ku jira, in kasta oo midkoodna aanu biyuhu ka madhnayn.
Samsung Galaxy S4 sidoo kale gacmaha ayuu ku laaban yahay
Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa in Samsung Galaxy S4 sidoo kale isku laaban tahay gargaarka keliya ee gacmaheenna.
Khabiir dhanka amaanka ah ayaa jabsada Aqoonsiga Taabashada ee iPhone 6 laakiin wuxuu xaqiijinayaa inaysan qatar aheyn
Hackers-ka oo sameeyay faro been ah oo khiyaameeyay Aqoonsiga Taabashada ee iPhone 6 wuxuu caddeeyay in howshu ay aad u dheer tahay oo aan wax faa'iido ah lahayn.
Sida hoos loogu dhigo iOS 8.0.1 ilaa iOS 8.0
Sida Looga Dhigo Macruufka 8.0.1 ilaa IOS 8 Talaabooyin Fudud oo Fudud, oo lala Xiriirayo Iskuxirayaal Ay Kujiraan
IPhone 6 iyo 6 Plus ayaa si dhakhso leh uga qaata xeedho iPad-ka
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ayaa soo sheegaya in si dhakhso leh loogu soo rogo qalabkooda iyaga oo isticmaalaya xeedhada iPad-ka.
Sida loo sameeyo loona helo wicitaanada ka yimaada iPad-kaaga oo wata iOS 8
IOS 8, Mac OS X Yosemite, iyo Continuity, waxaad kuheli kartaa wicitaan taleefan kaliya iPhone-kaaga, laakiin sidoo kale iPad-kaaga, iPod taabashada, iyo Mac.
Sida looga socdo Android ilaa iOS 8
Ka guurida Android ilaa macruufka ma ahan wax dhib badan, kaliya waxay qaadaysaa dhowr talaabo si aad u hubiso inaad heysato dhamaan waxyaabaha aad u baahan tahay, aan ku hago
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka batteriga ee iOS 8
Battery had iyo jeer waa dhibaato in nooc cusub ee macruufka. Tilmaamahan ayaa kaa caawin kara inaad wax badan ka hesho.
Fiidiyowyada gaabiska ah ee ay sameeyeen iPhone 6
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee iPhone 6 ayaa ah inuu leeyahay kaamiro aad ku duubi karto fiidiyowyo si tartiib tartiib ah ugu socda 240 fps, miyaan ku arki doonnaa iPad Air 2?
Meeday Reel-ka ku jirta iOS 8?
Aaway macruufkii hore ee 7 Reel? Ha ka welwelin inaadan lumin wax sawirro ah, waxaan kuu sheegi doonaa sida arjiga cusub ee Sawirrada uu ugu shaqeeyo macruufka 8
Sida hoos loogu dhigo iOS 8 ilaa iOS 7.1.2
Casharro sharaxaya talaabo talaabo ah sida loo rakibo macruufka 7.1.2 mar labaad ka dib markaad rakibto iOS 8 qalabkaaga
Sida loo hagaajiyo khaladaadka Instagram ee xisaabaadka Twitter iyo Facebook
Cusboonaysiinta 'Instagram' iyo tan 'iOS 8' ayaa ah in si isku mid ah loogu faafiyo shabakadaha kale ee bulshada ay bixiso qalad, halkan sharaxaad kooban oo lagu xallinayo.
Sida Looga Saaro Xiriirada Dhawaan iyo Kuwa Aad Loogu Jecel Yahay Waxyaabaha Badan ee iOS 8
Casharbarka oo aan ku tusinayno sida loo tirtiro waxyaabaha la jecel yahay iyo xiriirada ugu dambeeyay ee la muujiyey markii la marin lahaa adeegyo fara badan oo ku jira macruufka 8
Sida looga tirtiro iPad-kayga xiriirka labada nuqul
Thanks to the Smart Merge application, waxaan ka tirtiri karnaa xiriirada nuqul ka mid ah barnaamijkeena ku xirnaashada barnaamijka macruufka
Diyaarso iPhone iyo iPad si aad ugu cusbooneysiiso macruufka 8
Waxaan ku siinaynaa talooyinka si aad ugu cusbooneysiiso iOS 8 dhibaato la'aan